Jikọọ Google Adwords na Salesforce na Bizible Analytics | Martech Zone
Jikọta Google Adwords na Salesforce na Bizible Analytics
Monday, November 17, 2014 Satọde, Febụwarị 4, 2017 Douglas Karr
Ihe na-ada mba na-enye gị ohere nyochaa arụmọrụ nke Adwords gị dabere na ntụgharị karịa ịpị aka, na-enye gị ohere ịrụ ọrụ pụrụ iche na Salesforce iji tụọ arụmọrụ dabere na mkpọsa, otu mgbasa ozi, ọdịnaya mgbasa ozi, na ọkwa isiokwu. Ebe ọ bụ na Ihe na-ada mba na-arụ ọrụ na nsuso mkpọsa ugbu a na Google Analytics, ị nwere ike mfe soro ọtụtụ ọwa gafee ọchụchọ, na-elekọta mmadụ, na-akwụ ụgwọ, email na mkpọsa ndị ọzọ.
Key Akụkụ edepụtara na saịtị Bizible
AdWords ROI - na - enye gị ohere igwu ala na AdWords ROI na mkpọsa, otu mgbasa ozi, ọdịnaya ad, na ọkwa isiokwu, yabụ ị nwere ike ịlele ma mee mkpebi njikarịcha ọchụchọ dabere na ego.
Multi-Channel Ndepụta - na-akọ Google Analytics style UTMs parameters ozugbo na Salesforce, nke na-eme nyocha na njikarịcha mgbasa ozi ịntanetị ọ bụla site na ROI dị mfe.
Zuru ezu Lead History - Nwee ndi otu ahia gi agha n’ozi ahia ha kwesiri imechi. Hụ otu ndu gị na saịtị gị tupu ha agbanwee, gbakwunye ozi ahịa niile dị mkpa.
Akụkọ Ọdịdị - Ahịa ịntanetị na-aghọwanye ihe mgbagwoju anya na nkewa. Wụpụta mkpesa ngwaahịa a na-arụ ọrụ, yana akụkọ akụkọ a na-akparaghị ókè iji kwado azụmahịa gị.
Otutu Njikọ - Site na Salesforce mmelite ozigbo na ahịa akpaaka, usoro njikwa ọdịnaya yana ọbụlagodi Optimizely maka ule A / B. 60% nke Ihe na-ada mba ndị ahịa na-ejikwa Marketo, Hubspot, Act-On, ma ọ bụ Eloqua. Bizible nwekwara ntinye otu pịa na WordPress, Joomla, ma ọ bụ Drupal.
Ị nwere ike ịchọta Bizible na Saleforce AppExchange.
Tags: ule uleNa-aga n'ihuịgbanweeikekweusoro nlekọta ọdịnayaDrupalokwugoogle adwordsokpokoroJoomlaakụrụngwa ahịaahịakachasị mmandị ahịaire ere ahịandị na -ere ahịa ppcWordPress
Ndi Azụmaahịa Gị Na-eme Nke Ọ bụla nke Ajọ Omume Social Media?
Kwado ire ere mmekọrịta gị na Ecommerce Saịtị gị na GetSocial